अमेरिकी पोर्न फिल्ममा जम्दै यी नेपाली युवती ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
अमेरिकी पोर्न फिल्ममा जम्दै यी नेपाली युवती !
प्रकाशित मिति ३१ जेष्ठ २०७६, शुक्रबार ०७:०० लेखक नेपाली जनता
तिम्रो नाम के हो ?‘म माया बेजिन ।’तिम्रो घर कहाँ छ ?‘म नेपालबाट आएकी हुँ ।’…नेपाल कहाँ छ ?‘…चीनको छेउ, इन्डियाको नजिकै…। मलाई तिमीहरू इन्डियन ओरिजिन पनि भन्न सक्छौ।।’तिमीलाई किन पोर्न स्टार हुन मन लागेको ?मलाई ओरल सेक्स मन पर्छ, त्यसैले।।’
माया अर्थात् दीपशिखा त्यही दौडमा सामेल छिन् । कुनै स्वच्छन्द युवती यो दौडमा सामेल हुनु नौलो कुरा होइन, अचम्मको कुरा के हो भने उनले आफ्नो परिचय नेपाली भनेर दिएकी छिन् र उनको प्रोफाइल साइटमा पनि नेपालको राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गरिएको छ । पोर्न स्टार बन्न चाहनेहरूलाई अवसर दिने एउटा पोर्न साइट दचयतजभचयिखभ।अॐ ले मायाको १६ मिनेटको अन्तवार्ता -अडिसन)को भिडियो अपलोड गरेको धेरै भैसकेको छ । चुरोटको सर्को तानेर छिल्लिँदै उनले दिएको अन्तर्वार्ताको एक भागमा अन्तर्वार्ता लिने अमेरिकी पुरुष स्वरले उनीसँग नेपाली भाषामा बोल्न आग्रह गर्दै अंग्रेजी अश्लील शब्दलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्न लगाएका छन् । अनि माया नाम बताउने ती यौनसुन्दरीले केही बेर अकमकाउँदै ती शब्दको अनुवाद नेपालीमा गरेकी छिन् ।
मायाको त्यही एकमात्र अन्तर्वार्ताका आधारमा उनको नेपाल वा नेपालीसँग कुनै न कुनै रूपबाट संलग्नता छ भन्ने ठहर हुन्छ । उनको भाषा सुन्दा उनी लामो समय अमेरिका बसे पनि उनको मातृभाषा नेपाली नै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ । उनले अमेरिकाको यौनचलचित्र उद्योगमा आफूलाई नेपाली भनेर परिचित गराएपछि अमेरिकामा बसेका नेपालीहरूबीच उनको खोजी सुरु भयो । मायाका तथ्यहरू जति सार्वजनिक हुँदै गए, त्यसले अमेरिकामा बसोबास गरिरहेको नेपाली समाजमा हलचल मच्चायो । प्रवासी नेपालीहरू संलग्न कबवजब।यचन मा अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूले उनका ’बोउत्मा आफ्नो जानकारीहरू लेखेका छन् । आफूलाई ‘वैरागी काइँलो’ का रूपमा परिचय दिने एक व्यक्तिका अनुसार माया नामधारी ती यौनसुन्दरीको घर भक्तपुरमा छ र उनी आधा नेपाली, आधा भारतीय हुन् ।
गुगल सर्च इन्जिनमा बथब द्यबशष्ल टाइप गरी सर्च गर्दा आफूलाई नेपाली बताउने सेक्स सुन्दरी माया बेजिन अर्थात् दीपशिखा कार्कीझाका भिडियो, अन्तवार्ता, तस्विर आदि फेला पार्न सकिन्छ । थयगतगदभ।अॐ मा पनि मायाले दिएको एउटा अडिसनको भिडियो हेर्न पाइन्छ । त्यहाँ भने उनले आफूलाई भारतीय बताएकी छिन् । यदि उनी साँच्चै भारतीय हुन् भने दचयतजभचयिखभ।अॐ मा उनले किन नेपालीमै बोलिन् ? सम्भवतः आफ्नो परिचय लुकाउन मायाले अन्तर्वार्ताको एक दृश्यमा ‘भित्र’ को साटो हिन्दी शब्द ‘अन्दर’ प्रयोग गरेकी छिन् ।
मायाको पहिलो यौन भिडियोमा उनी एउटा घरमा अधबंैसे पुरुषसँग प्रवेश गर्दा भित्र ढुकेर बसेको मानिसले हतियार देखाएर ती अधबैंसेलाई आफ्नो कब्जामा लिन्छ, अनि मायासँग यौन क्रियाकलाप गर्न थाल्छ, जसमा पछि गएर ती अधबैंसेले पनि साथ दिन्छन् । मायाले ती दुवै पुरुषसँग प्राकृतिक-अप्राकृतिक यौनक्रीडा गर्छिन् । उनको पहिलो यौन चलचित्र निकै स्तरीय प्रविधिमा निर्माण भएको छ । उक्त भिडियो डाउनलोड गर्न अउम्भबतष्लनअगअपयमिक।अॐ रनगभकतरनबििभचष्भकर म्बथब) दबशष्ल मार्फत ३० देखि १ सय अमेरिकी डलर खर्चिनुपर्ने हुन्छ, यद्यपि भिडियोको ट्रेलर भने सित्तैंमा हेर्न पाइन्छ । मायाको पूरै अन्तवार्ता सुन्न बेव बारमा धधध।दचयतजभचयिखभ। अॐरखष्मभय-बचअजष्खभम्बथब-दबशष्ल टाइप गर्नुपर्छ ।
आफूलाई नेपाली बताउने अमेरिकी यौन चलचित्रकी स्टार माया बेजिनको वास्तविक नाम दीपशिखा नै हो । उनको एउटा अर्को अडिसनको भिडियो पोर्न साइट दबलनदचयक।अॐ पनि फेला परेको छ । सेतो स्लिभलेस र जिन्स लगाएकी माया अर्थात् दीपशिखाको अडिसन कुनै रेकर्डिङ स्टुडियोजस्तै देखिने कोठामा लिइएको छ । भिडियोको सुरुवातमै माया भनिएकी उनले आफ्नो नाम दीपशिखा भएको र त्यो नाम नेपाली भएको बताएकी छिन् । भिडियोमा स्वर मात्र सुनिने अडिसन लिने व्यक्ति एक पोर्न स्टार भएको उनीहरूबीचको वार्तालापका क्रममा स्पष्ट हुन्छ । दिनको कम्तीमा दुई युवतीसाग यौनसम्पर्क राख्ने आफ्नो दिनचर्याका ’बोउत्मा ती व्यक्तिले हालसम्म ४ हजारजति युवतीसाग सम्पर्क राखेको बताउँदा दीपशिखा चकित परेकी छिन् । दीपशिखाले आफू हाल प्लस टु पढिरहेको र मोजमस्ती गर्न भन्दा पनि ग्य्राजुएसन गर्ने उद्देश्यले स्कुल जाने गरेको बताएकी छिन् । १४ वर्षको उमेरमा २१ वर्षका युवकसाग पहिलो पटक यौनसम्पर्क गरेको र ती युवकसाग लगातार दुई वर्ष सम्पर्क गरेको उनले बताइन् ।
उनले आफूलाई केटाहरूले ँयुज एन्ड थ्रो’ गरेका कारण केटासाग भन्दा केटीहरूसाग सम्बन्ध गाँसेको पनि बताएकी छिन् । दीपशिखाले आफू महिला समलिंगी भएको र ३० जना केटी साथीसाग सम्बन्ध राखेको बताएकी छिन् । एउटा केटासाग आफ्नो ँइन्गेज्मेन्ट’ पनि भैसकेको र ऊसागको यौनसम्बन्ध राम्रै भए पनि चित्तबुझ्दो नभएकाले सम्बन्ध राम्रो नभएको उनले उक्त अडिसन भिडियोमा भनेकी छिन् । निकै उत्तेजक ढंगबाट लिइएको उक्त अडिसनलाई दीपशिखाले आफ्नो दोस्रो अडिसन भनेकी छिन् । अडिसनको अन्त्यमा ती पोर्न स्टारले दीपशिखासाग यौन सम्पर्क गरेका छन्, जसको भिडियो तथा ट्रेलर पनि वेबसाइटमा फेला पार्न सकिन्छ । अडिसनको ँफुल भर्सन’ हेर्न भने पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ । उनका यौन भिडियोको थि्रडी भर्सन पनि तयार भैसकेका छ । माया अर्थात् दीपशिखाको भिडियो खिच्ने क्यामरा तथा प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ ।
दीप बस्न्यातका मानव तस्कर फरार छोरा बत्तिसपुतलीमा लुकेर बसेको खुलासा
काठमाडौं । काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको याख्खा ओभरसिजका संचालक कमल बस्नेत आफ्नै घर बत्तिसपुतलीमा लुकेर बसेको फेला परेको छ…
खाना खाँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने नियमहरूः
ज्ञान बाडनू सबै भन्दा ठूलो धर्म हो। यहाँ लेखिएको जानकारी यदि हजुर अरुकोलागि पनि उपयुक्त हुने ठान्नुहुन्छ भने यो…
सामाजिक संजालमा विज्ञापन: १० हजार लाइकले ६० हजारसम्म कमाइ
काठमाडौं । अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्कालाई अचेल रेडियो, टेलिभिजनभन्दा सामाजिक संजालबाट विज्ञापन गरिदिन बढी आग्रह आउँछन् ।
उनले केही अघि आफ्नो…
क्रिकेट संघको चुनावमा अध्यक्षमा पाण्डे र चन्द भिड्ने
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को अध्यक्षमा विनयराज पाण्डे र चतुरबहादुर चन्द भिड्ने भएका छन् । यद्यपि अरु तेस्रो…
काठमाडौं । लगनखेलबाट सातदोबाटोसम्मको दूरी ०.८ किलोमिटर छ। अर्थात् एक किलोमिटर पनि छैन। त्यही टुक्रे खण्डको सडक विस्तार…